Tech4Families: Wax ka qabashada qaybsiga dhijitaalka ah ee lammaanaha - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Teknolojiyada dijitaalka ah, oo ay kujirto internetka, ayaa saameyn aan la qiyaasi karin ku yeeshay nolosha dad badan oo daafaha dunida ah. Si kastaba ha noqotee, marin u helka iyo adeegsiga teknolojiyaddu ma aha mid caalami ah mana sinna Haweenka iyo gabdhaha ayaa ah kuwa ugu nugul caqabadaha xagga dhaqaalaha, bulshada, iyo caqabadaha dhaqan labadaba xaddidaya iyo ka-hortagga marin-u-helka haweenka ee teknolojiyadda iyo faa'iidooyinka ay keenaan.
Waqooyiga Nigeria, ku dhawaad ​​60% haweenka haweenka ah ma awoodaan inay isticmaalaan internetka, waxaana cilmibaaris la sameeyay ay muujineysaa in qotada dheer ee bulshada, jinsi, iyo caadooyinka dhaqanka ay caqabad weyn ku yihiin marin u helka dumarka iyo gabdhaha galaangalinta iyo isticmaalka teknolojiyadda iyo internetka. . Sida lagu sheegay daraasad ay dhowaan sameeyeen Xarunta Macluumaadka Teknolojiyada iyo Horumarinta (CITAD), 55% ragga ah Waqooyiga Nigeria ma doonayaan in haweenkooda ay isticmaalaan internetka, iyo 61% aabayaasha ayaa ka niyad jabiya adeegsiga gabdhahooda. In kasta oo tirooyinka ragga ay badiyaa yihiin kuwa xakameynaya galaangalka heer qoys, haddana xogtu waxay sheegeysaa in labada jinsiba ay galeen gudaha iyo caadooyinka xakameynaya.
Iyada oo laga jawaabayo tan, ayaa EAI ku soo rogtay USAID's Loolanka Haweenka waana ku faraxsanahay in naqshadeena cusub ee udub dhexaadka u ah laga soo xushay in ka badan 500 codsadeyaal. Iyada oo ku saleysan hababka wax ka-qabashada la tijaabiyay ee naga Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga mashruuca ka socda Nepal, laakiin iyadoo diirada la saarayo dhamaan qaybaha qoyska, Tech4Families waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo kala qaybsanaanta jinsiga iyadoo la wajahayo caqabadaha bulshada ee hortaagan helitaanka haweenka iyo gabdhaha ee adeegsiga tikniyoolajiyadda heer qoys oo ah talaabada ugu horeysa ee muhiimka ah.
Waxaa diirada la saaraa manhajka is dhexgalka iyo riwaayadaha raadiyaha, ee qoysaska (oo ka kooban aabeyaal, hooyooyin, wiilal, iyo gabdho) kulmaan bishii laba jeer si ay si waadax ah uga tarjumaan caqabadaha jira ee ka hor istaagaya haweenka iyo gabdhaha inay helaan teknolojiyadda oo ay bartaan xirfado cusub, sameynta koonto email ama barashada ku saabsan dambiyada internetka si wax ku ool ah loola xiriiro qoys ahaan. Wejigii ugu dambeeyay kalfadhiga manhajka, kaqeyb galayaashu waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan qorsheynta nashaadaadyo wacyigelineed oo bulsho oo dheeri ah si ay ula wadaagaan fikradaha, dabeecadaha, iyo dabeecadaha kooxaha qoyskooda yar yar bulshada guud ahaan.
Waxaan durba aragnay isbeddelo ku saabsan aragtiyaha kaqeybgalayaasha dumarka iyo ragga, iyo caadooyinka cusub ee la qaadanayo laguna dhiirrigelinayo dhiirigelinta iyo dhiirrigelinta adeegsiga sinnaanta ee gabdhaha iyo gabdhaha.
Waaliddiinta iyo caruurtu waxay sidoo kale wadaagayaan sida kulan qoys ahaan ay ugu soo dhaweyeen una wareegeen dhaqdhaqaaqa qoyska si ay ugu oggolaadaan wada hadal furan oo ku saabsan internetka:
Markii hore waxaan wada fikirnay in intarnetku ay tahay wax khatar badan leh oo lala macaamilo laakiin hadda waxaan wada ogsoonahay in internetku yahay goob saaxiibtinimo leh.
Waxaan u fadhiisanaa qoys ahaan si aan uga wada hadalno internetka iyo tikniyoolajiyadda khaas ahaan inta lagu gudajiro meelaynta guriga. Waxaan u maleynayaa inaan dhammaanteen helno kalfadhiyadaan madaddaalada ah ee carruurteenna, oo carruurteenna annagaa annaga noo furan.
Kulamadaani waxay iga dhigeen inaan doonayo inaan dadaal dheeri ah ku bixiyo sidii aan u hubin lahaa inay haweenku internetka ku isticmaalaan gurigayga iyo goobta shaqada.
Hal qoys ayaa qirey in haddii aysan ahayn mashruuca Tech4Families, ay si fudud uga mamnuuci lahaayeen inantooda inay adeegsato warbaahinta bulshada iyagoo ka baqaya inay sameyneyso wax aan habooneyn oo ka walaacsan waxa dadka kale ee qoyska ka tirsan ay dhihi karaan. Si kastaba ha noqotee, waxay barteen in habka ugu wanaagsan ay tahay inay raadiyaan qaabab ay ku taageeraan gabadhooda oo ay ugu wacyi geliyaan wax ku saabsan amniga khadka tooska ah, halkii ay ka qaadi lahaayeen taleefankeeda.
Fadlan daawo fiidiyaha hoose si aad wax uga ogaato saameynta ay ku yeelatay Tech4Families.
Kala shaqee EAI si ay ula qabsato caadooyinkayaga shaqada wax looga beddelo si wax looga qabto kala qaybsanaanta dhijitaalka ah.